Inona no filaharan'ny bokin'ny Baiboly ▷ ➡️
Inona no filaharan’ireo boky ao amin’ny Baiboly?
Inona no filaharan’ireo bokin’ny Baiboly? Ny filaharan’ireo boky ao amin’ny Baiboly dia foto-kevitra sarotra, satria tsy izany no fomba fanasokajiana azy ireo. Ny bokin'ny Baiboly dia navondrona araka ny karazana literatiora (boky ara-tantara, tononkalo, faminaniana, taratasy), fa tsy araka ny filaharan’ny tantara. Marina fa misy boky nalamina araka ny fotoana, nefa tsy tokony hieritreritra isika hoe izy rehetra, satria tsy izy.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia asehon'ny filaharan’ny fotoana, ireo fisehoan-javatra mitantara ao amin’ny boky tsirairay ao amin’ny Baiboly. Tsy fantatra mazava hoe oviana no nanoratana boky maro ao amin’ny Baiboly, satria ny sasany dia nosoratana fotoana fohy taorian’ny fitantarana ireo zava-nitranga, fa ny hafa kosa nosoratana na natonta tatỳ aoriana. Noho io, mora kokoa ny mandamina ny boky amin’ny alalan’ny zava-mitranga tantarainy . Izany koa no fomba tsara hamakiana ny bokin’ny Baiboly.
1 Ny filaharan’ireo boky ao amin’ny Baiboly
1.1 Boky ara-tantara
1.2 Boky tononkalo sy fahendrena
1.3 Bokin’ny faminaniana
1.4 Taratasy Testamenta Vaovao
Ny filaharan’ireo boky ao amin’ny Baiboly
Mba hahitana ny filaharan’ireo boky ao amin’ny Baiboly, dia nanao ireto lisitra manaraka ireto izahay. Ho hitantsika fa ny voalamina ny boky toy izao manaraka izao:
ny tantara taloha apetraka eo amin’ny tapany ambony izy ireo mandra-pahatongan’ny farany izay apetraka eo amin’ny tapany ambany.
Boky ara-tantara dia voalamina, ara-potoana kokoa na latsaka ao amin’ny Baiboly, mamakivaky ny tantaran’ny vahoaka hebreo ao amin’ny Testamenta Taloha sy ny tantaran’i Jesosy ary ny fiandohan’ny fiangonana ao amin’ny Testamenta Vaovao.
Ny bokin'ny faminaniana sy tononkalo dia voalamina araka ny fotoana izay niainan’ireo mpaminany na poety.
Ny taratasin’ny Testamenta Vaovao dia nalamina araka ny fotoana mety voasoratra.
Tokony hotadidintsika rehefa mamaky ny bokin’ny Baiboly fa, amin'ny boky samy hafa dia azo averina ny zava-nitranga izay nitranga tamin'ny fotoana iray ihany na mitantara tantara miverimberina.
Manaraka izany dia hotanisaintsika avokoa ireo boky ara-tantara ara-potoana izay itantarana ny tantaran’ny vahoakan’Israely.
Ireto boky ireto dia:
Boky tononkalo sy fahendrena
Ao anatin'ity sokajy ity dia mahita boky 5 isika. Ireto manaraka ireto:
Ireo boky 17 ireo dia nalahatra araka ny vanim-potoana nisy azy ireo velona ny mpaminany na poeta.
Taratasy Testamenta Vaovao
Amin'izay dia afaka milaza izany isika ny lamina arahina dia ny fanoratana azy. Ao amin'ny toerana voalohany dia ny voalohany nosoratana, ary amin'ny farany, ny farany indrindra.
Manantena izahay fa efa fantatrao inona ny filaharan'ny bokin'ny Baiboly misaotra ny lahatsoratray. Raha te-hanohy hahita fampahalalana mahaliana kokoa ianao toy ny Inona avy ireo tombo-kase fito amin'ny apokalipsy, mijanona ao discover.online ary aza manary tsipiriany.
Inona no fitenin'ny Anjely any an-danitra
Inona ireo foko roa ambin'ny folo amin'ny Isiraely
ENTANA NOVOKARINA To learn MAIMA VE Very lanja | FAHASALAMANA zava-pisotro Malagasy FAHASALAMANA Ahoana no Dios isan-karazany farany andian-teny Fiangonana Katolika angano DIDINY Matematika Ny nofiko vavaka Popular Fivavahana sakramentan'ny Santos No Category nofy hantsaka Tarot WhatsApp